Single ဖြစ်ခြင်းကို သင်လက်ခံသင့်တဲ့ အကြောင်းရင်း (၁၂) ချက် - Lifestyle Myanmar
Single ဖြစ်ရတာကို သိမ်ငယ်တယ်လို့ ခံစားနေရသလား? Single ဖြစ်ရတာ သိမ်ငယ်စရာ ဘာမှမရှိပါဘူးနော်။ RS တိုင်းက ပျော်ရွှင်နေတာမဟုတ်သလို Single တိုင်းကလည်း အထီးကျန်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ Single တွေမှာ RS တွေမရနိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
ချစ်သူထားရတာ၊ ချိန်းတွေ့ရတာမှ ခက်ခဲပါသေးတယ်။ သူတို့က သင့်ဆီကနေ အများကြီး ယူသွားနိုင်ပါတယ်။ တစ်ချို့က တစ်ကိုယ်ရည် တစ်ကာယဖြစ်တာ ပိုကောင်းတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါက မမှားပါဘူး၊ Single ဖြစ်ရခြင်းက လူအများကြီးကို ဆွဲဆောင်နိုင်တာကြောင့် အကျိုးကျေးဇူးတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
သင်ရည်းစားမထားခင်မှာ Single ဖြစ်ခြင်းဖြင့် အချိန်တိုလေးအတွင်းမှာတောင် ဘယ်လောက်ရနိုင်သလဲဆိုတာ စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ သေချာတာပေါ့။ လူတိုင်းက ချစ်ချင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မင်း အမြန်ရည်းစားရမှ ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ စည်းကမ်းမရှိပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ချည်နှောင်ခြင်းမပြုခင်မှာ single ဘဝရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးအားလုံးကို ခံစားဖို့ သင့်ကိုယ်သင် အချိန်ပေးသင့်ပါတယ်။ single ဘဝကို လက်ခံသင့်တဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေ ဒီမှာရှိပါတယ်။
၁။ ကိုယ့်အချိန်နဲ့ ကိုယ် တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်နိုင်ပါတယ်
သင်ဟာ တစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့ relationship ကိုတည်ဆောက်တဲ့အခါ relationship အလုပ်ဖြစ်စေဖို့ သင့်ရဲ့အချိန်အတော်များများကို သူ့အတွက် ရည်စူးသတ်မှတ် ပေးရပါလိမ့်မယ်။ ဆိုလိုတာက သင်ဟာ သူ့အတွက် အချိန်တွေ ပေးရမှာပါ။ ဒါက သင်ပြန်ရမှာ မဟုတ်တဲ့ အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်အချိန်နဲ့ ကိုယ် တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ခြင်းက မှားတယ်လို့ မခံစားမိပါစေနဲ့။ ဒါက သင့်ကိုယ်ပိုင်အချိန်ပါ။ သို့သော် Relationship တစ်ခုမှာတော့ သင့်အချိန်တွေ လိုအပ်လိမ့်မယ်ဆိုတာ သတိရပါ။ ကိုယ့်အချိန်ကို ကိုယ့်ဘာသာသုံးချင်ရင် single လုပ်နေပါ။
၂။ သင့်ကိုယ်သင် ဦးစားပေးနိုင်ပါတယ်
သင့်ကိုယ်သင် ပထမနေရာမှာ ထားသလို ဘယ်သူ့ကမှ သင့်ကို ပထမနေရာမှာ ထားပေးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ချစ်သူရည်းစားရလာပြီဆိုရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပထမနေရာမှာ ထားဖို့ ခက်ခဲလာနိုင်ပါတယ်။ သင်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လိုအပ်ချက်တွေကို အချစ်ရေးရဲ့လိုအပ်ချက်တွေက အစားထိုးသွားတာကို သင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဘေးထွက်နေဖို့ တာဝန်ရှိသလို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ဒီအရာက အမြဲတမ်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုဖြစ်ခဲ့ရင် သင်ဟာ ပြည့်စုံမှုမရှိတော့သလို ခံစားရပြီး နောက်ဆုံးမှာ အချစ်ရေးပြဿနာတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ တကယ်လို့ သင်ဟာ အမှန်တကယ် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဦးစားပေးလိုပါက Single ဘဝကို လက်ခံပါ။
၃။ ကြိုက်တဲ့သူကို စိတ်ဝင်စားနိုင်ပါတယ်
ချစ်သူရည်းစားရသွားတဲ့အခါ အရမ်းသဝန်တိုတတ်တဲ့ ချစ်သူမျိုးနဲ့ဆိုရင် အခြားတစ်ယောက်ကို ကြည့်ဖို့တောင် မလွယ်တော့ပါဘူး။ သင်က Single ဆိုရင်တော့ ဘာနှောင်ကြိုးမှမပါဘဲ အခြားတစ်ယောက်ကို လွတ်လပ်စွာ စိတ်ဝင်စားခွင့်ရှိပါတယ်။
၄။ RS ဖိအားတွေကို ရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ်
RS တည်ဆောက်ခြင်းအတွက် အလုပ်များစွာ လိုအပ်ပြီး သင့်အပေါ် ဖိအားများစွာ ပေးနိုင်ပါတယ်။ RS တစ်ခုနှင့်အတူ သင်ဒါကို အနိုင်ရမှ ဖြစ်မှာပါ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် ဖိအားက သင့်ဇာတ်ကို သင်ဆက်မကနိုင်တာ ဖြစ်သွားစေပါတယ်။ သင့်လက်တွဲဖော်ရဲ့ အသည်းကိုခွဲခြင်းဖြင့် အဆုံးသတ်သွားပါလိမ့်မယ်။
တကယ်လို့ RS ရဲ့ဖိအားပေးမှုက သင့်လမ်းကြောင်းကို ရပ်တန့်သွားစေပါက အဆင်သင့်မဖြစ်ခင်မှာ Single ဘဝနဲ့ နေသင့်ပါတယ်။ ဒါက လူကောင်းတစ်ယောက်ကို မထိခိုက်စေဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
၅။ ငွေစုဆောင်းရတာ လွယ်ကူပါတယ်
RS က စျေးအရမ်းကြီးပါတယ်။ မွေးနေ့တွေ၊ နှစ်ပတ်လည်နေ့တွေ၊ ချစ်သူများနေ့တွေ၊ ခရီးထွက်တာတွေနှင့် အခြားအရာတွေအတွက် စိတ်ပူစရာတွေ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ အမျိုးသားတွေအနေနဲ့ ကုန်ကျစရိတ် ပိုများနိုင်ပါတယ်။ သင့်လက်တွဲဖော်က ငွေကုန်ခံဖို့ တောင်းဆိုမှာမဟုတ်ပေမဘ့် သင်မလုပ်ရင် RS ကတစ်ဖက်သတ်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ သင့်မှာ ငွေကြေးပြဿနာတွေရှိပါက (သို့) ငွေစုဖို့ ပန်းတိုင်ထားပါက Single ဘဝနဲ့သာ နေပါ။
၆။ သင့်ဘဝမှာ ဒရမ်မာတွေကို ရှောင်ရှားနိုင်မှာပါ
(အထူးသဖြင့် သင်တို့အချစ်ရေးက တကျက်ကျက်နဲ့ ရန်ဖြစ်တတ်တဲ့ အချစ်ရေးမျိုးဆိုရင်) Relationship က သင့်ဘဝထဲကို ဒရမ်မာတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ နားလည်မှုလွဲမှားခြင်း၊ အငြင်းပွားခြင်းနှင့် ရန်ပွဲတွေ ဖြစ်ပွားလာနိုင်ပါတယ်။ ဒီတင်းမာမှုက RS ကိုရှေ့မဆက်နိုင်တော့ဘူးလို့ ထင်တဲ့သူဆီကနေ လာနိုင်ပါတယ်။ ဒရမ်မာက မနာလိုမှုနှင့် မလုံခြုံမှုတွေ မှလည်း လာနိုင်ပါတယ်။
ဒရမ်မာဟာ သင့်ဘဝတစ်သက်တာနှင့် အချစ်ရေးမှတဆင့် ဝင်ရောက်လာနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းများစွာ ရှိပါတယ်။ အချစ်ရေးပြဇာတ်ကို ရှောင်ရှားချင်ပါက တစ်ကိုယ်တော်ပျံသန်းတာ အကောင်းဆုံး အကြံပြုချက်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
၇။ ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် လွတ်လပ်ခွင့်ရှိပါတယ်
အချို့လူတွေဟာ ငှက်တွေလို ဖြစ်ကြပြီး လေနှင်ရာအတိုင်း ပျံသန်းလိုကြပါတယ်။ သင့်မှာ RS မချိတ်ထားရင် ဒါက မမှားပါဘူး။ relationship တစ်ခုမှာ လူတစ်ယောက်ကို ကတိကဝတ်ပြုဖို့ လိုအပ်သော်လည်း လူအများစုက တည်နေရာကို ကတိကဝတ်ပြုဖို့လိုအပ်ကြောင်း မသိကြပါဘူး။
အဝေးရောက် အချစ်ရေးမှလွဲပြီး အချစ်ရေးတစ်ခုမှာ အကွာအဝေးထားခြင်းက Single ဘဝနဲ့ အဆုံးသတ်ရနိုင်ပါတယ်။ သင်အခြေချဖို့ အဆင်သင့်မဖြစ်မချင်း တစ်ယောက်တည်း နေနိုင်ပါတယ်။
၈။ Friendship တည်ဆောက်ခြင်းကို အာရုံစိုက်နိုင်ပါတယ်
သူငယ်ချင်းကောင်းရှိခြင်းက အချစ်ရေးကောင်းရှိသလိုပဲ အရေးပါပါတယ်။ သုတေသနပြုချက်အရ သင့်သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ အရည်အသွေးက သင့်ဘဝမှာ သင့်ကျေနပ်မှုကို တိုက်ရိုက်သက်ရောက်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် တစ်ကိုယ်ရေဘဝဖြစ်ခြင်းနဲ့ ဘယ်လိုသက်ဆိုင်သလဲ?
RS များစွာက သင့်အချိန်များစွာကို ကုန်ဆုံးစေနိုင်ပါတယ်။ တချို့လက်တွဲဖော်တွေက သင့်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ သင့်ကို သိပ်မတွေ့စေလိုပါဘူး။ ဒါက အချစ်ရေးထဲမှာ တင်းမာမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ အချစ်ရေး မတည်ဆောက်ခင်မှာ ခိုင်မာတဲ့ Friendship ကို တည်ဆောက်သင့်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်ချစ်သူနဲ့ ပြတ်သွားခဲ့ရင်တောင် Friendship က တစ်သက်တာလုံး တည်တံ့နိုင်ပါတယ်။
၉။ သင့်ကိုယ်သင် ပျော်ရွင်စေဖို့ သင်ယူနိုင်ပါတယ်
သင်ကိုယ်တိုင် ဘယ်လိုပျော်ရွင်ရမှာကို မသိရင် RS မှာ ပျော်ရွင်ဖို့ ခဲယဉ်းပါတယ်။ သင့်ကို အမြဲတမ်းပျော်ရွင်စေမယ့် လက်တွဲဖော်ကို အားကိုးခြင်းက ဒုက္ခရောက်စေဖို့အတွက် လမ်းစတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါက ကိုယ့်ကိုယ်ကို မျက်နှာသာပေးပြီး တစ်ကိုယ်တော်ပျံသန်းသင့်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်လို ပျော်ရွင်အောင် လုပ်ရမလဲဆိုတာ လေ့လာပြီးရင် RS တစ်ခုကို ပြင်ဆင်တာ ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။
၁၀။ အလုပ်အပြောင်းအရွေ့တွေမှာ ပဋိပက္ခဖြစ်ပေါ်စေမှာ မဟုတ်ပါဘူး
ဒီနည်းလမ်းက နံပါတ်၇နည်းလမ်းရဲ့ အဆက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်က အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေ ပြောင်းရွေ့ဖို့ လိုအပ်လာပြီဆိုပါစို့။ သင့်မှာ RS ရှိပါက သင်တို့နှစ်ယောက်စလုံးအပေါ် ဖိအားရောက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါက RS ရဲ့နိဂုံးလည်း ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
သင်တစ်ယောက်တည်းနေရင် အလုပ်က ဘယ်ပြောင်းပြောင်း၊ ဘယ်မှာပဲ အခြေချချ၊ သင့်မှာ အပြစ်ရှိသလို ခံစားရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ Single ဘဝနဲ့ နေတဲ့အချိန်က သင်သွားချင်တဲ့ နေရာကို လွတ်လပ်စွာ သွားနိုင်ပါတယ်။
၁၁။ သင့်စိတ်ခံစားချက် ရင့်ကျက်မှုကို ဖွံ့ဖြိုးအောင် လုပ်နိုင်ပါတယ်
တစ်ခါတရံ သင့်မှာ RS တစ်ခုအတွက် စိတ်ခံစားချက် ရင့်ကျက်မှု အလုံအလောက် မရှိတတ်ပါဘူး။ ဒါက အဆင်ပြေပါတယ်။ လူတိုင်းက လွတ်လပ်ခွင့်၊ ရိုင်းစိုင်းခွင့်၊ ငယ်ရွယ်ခွင့် ရထိုက်ပါတယ်။ သို့သော် ဒီနာမဝိသေသနတွေက RS ချိတ်ထားသူတစ်ယောက်အတွက် မသင့်တော်ပါဘူး။
လူတွေနဲ့ ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမယ်၊ အခြားသူတွေကို သင့်ရှေ့မှာ ဘယ်လိုထားရမယ်ဆိုတာကို လေ့လာပါ။ တနည်းအားဖြင့် RS တစ်ခု မစတင်ခင်မှာ ပျိုးထောင်ပါ။ သင်မလုပ်မချင်း Single ဘဝက သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးဘဝဖြစ်ပါတယ်။
၁၂။ သင်ဟာ လက်တွဲဖော်ကောင်း ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်
တစ်စုံတစ်ယောက်အတွက် လက်တွဲဖော်ကောင်း ဖြစ်စေဖို့ အတူတူသွားရမယ့် အကြံဉာဏ် များစွာရှိပါတယ်။ single ဘဝကို ခေတ္တမျှ လက်ခံခြင်းဖြင့် သင်အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ အရာအားလုံးကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ သင်ဟာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ တည်ငြိမ်မှုနှင့် ရေရှည်ဆက်ဆံရေးအတွက် ပြင်ဆင်ထားရပါလိမ့်မယ်။ အမှားတွေလုပ်ဖို့ single ဘဝကို အသုံးချပါ။ ပြီးရင် သူတို့ဆီကနေ သင်ယူပါ။